Itemplate yeWordPress: Papasha iZithuba zeXesha elizayo njengeziganeko ezizayo
I-WordPress: Papasha iZithuba zeXesha elizayo njengeziganeko ezizayo
Siyakhele indawo encinci yeWordPress Ukubhengezwa kweNkampani yeDummies kwaye sifuna ukuba necandelo apho sibonisa khona iminyhadala ezayo kwibar esezantsi. Isisombululo sokwenza oku silula kwaye sakhiwe ngqo kwi-WordPress. Ngaphakathi komxholo wakho, ungongeza iluphu enemibuzo kuphela kwaye ubonise izithuba ezizayo zodidi oluthile olusetyenziselwa imicimbi yeXesha elizayo:
<?php query_posts('order=ASC&ikati = 3 & post_status = kwikamva, shicilela '); ukuba (une_post ()): ngelixa (une_post ()): i_posi (); ukuba (strtotime (fumana_ixesha ("F jS Y"))> ixesha ()): qhubeka; enye: echo $ post-> id; ?>
Indlela yokubuza_post ibekwe nje ngaphambi kokuba iluphu yeWordPress inyuse izithuba ezipapashiweyo kumbuzo osetyenzisiweyo. Kuba ezi zizithuba zebhlog ezicwangcisiweyo zexesha elizayo (ngomhla womsitho), awuzukuba naxhala lokuba ziya kuboniswa kwibhlog yakho engundoqo kwitemplate yakho. Unokufuna ukufihla iindidi kuluhlu lwakho, nangona kunjalo. Oku kunokufezekiswa ngokuhlela uluhlu lwakho lodidi kwitemplate yakho yeWordPress usebenzisa ukhetho olungafakwanga:
Songeze imethadatha yeposti ukubonisa indawo yomnyhadala. Oku kufezekisiwe kusetyenziswa icandelo leWordPress 'yeNdawo eMiselweyo. Chwetheza nje indawo yegama legama kunye nendawo okuyo yexabiso… emva koko fumana indawo yokubonisa usebenzisa get_post_meta umyalelo ongentla.
Indawo enesiphumo ipholile, inoyilo olwahluke ngokukodwa kunye nolwakhiwo olunazo zonke izinto eziyimfuneko ukukhuthaza incwadi:
tags: iziganekoizithuba ezizayoWordPressIziganeko zegamawp_list_ zigaba
Yintoni ukuSebenzisa iiNjini zokuKhangela?
Juni 5, 2010 ngo-11: 24 AM
Siphinde sakha ukondla okwenziwe ngokwesiko kunye neziganeko ezizayo ezithunyelweyo kunye nokulungisa isizukulwana semephu yeXML ukuze sipapashe izithuba ezizayo. Ukuba usebenzisa i-Arne Brachenwald's XML Sitemap Generator, umgca 1747 we-sitemap-core.php unokuhlaziywa kwi- $where.=” (post_status IN ('publish','future') AND (post_type = 'post' OR post_type = ”)) “;
Oktobha 15, 2011 ngo-9: 36 PM
Bendifuna olu hlobo loncedo, kodwa ikhowudi yokuqala iyanqunyulwa ingekagqitywa. Ngaba ungathumela umgca wokuqala ukuphendula la magqabantshintshi?
Oktobha 16, 2011 ngo-9: 48 PM
Uxolo ngale kirkward! Ndiyilungisile iposti ukuze ikhowudi ibonakale ngoku!